Mahdi Guuleed oo shaki bixiyay xildhibaanada ka keenay Farmaajo mooshin - Caasimada Online
Home Warar Mahdi Guuleed oo shaki bixiyay xildhibaanada ka keenay Farmaajo mooshin
Mahdi Guuleed oo shaki bixiyay xildhibaanada ka keenay Farmaajo mooshin
Jabuuti (Caasimada Online) – Ra’iisul wasaare ku xigeenka Dalka Mahdi Maxamed Guuleed Khadar oo ka qeyb galayay kulan ka dhacay dalka Jabuuti ayaa faahfaahin ka bixiyay waxyaabaha shakiga dhaliyay ee ka dambeeyay mooshinka madaxweynaha.
Kulanka looga hadlayay isbadalka gobolka oo ka dhacay magaalada Jabuuti ayaa wuxuu ka sheegay in markii hore dowladaha Soomaaliya, Ethiopia iyo Eritrea ay iska kaashanayeen Ammaanka, ganacsiga iyo Siyaasadda oo Soomaaliya ay dan ugu jirto.
Wuxuu sheegay in xubnaha baarlamaanka iyo shaqsiyaadka kalaba inay fasiraad qaldan ka bixiyeen kulamadii ay lahaayeen madaxda ugu sareyso seddexda dal, balse aysan jirin heshiis rasmi ah oo ay gaareen madaxweynayaasha.
Mahdi Guueed, ayaa u sheegay dadka fasiraadda qaldan ka bixiyay kulamada madaxweynaha inay ogaadaan in dalka uu leeyahay labo gole iyo dowlad goboleedyo islamarkaana madaxweynaha kaligii inuusan ogolaan karin in hal madaxweyne ay yeeshaan dalalka Ethiopia, Somalia iyo Eritrea.
Ra’iisul Wasaare ku xigeenka Dalka ayaa tilmaamay in hadii heshiis uu yahay is afgaradka Madaxda Dalalka Soomaaliya, Itoobiya iyo Eretareeya ay soo bandhigi lahaayeen Madaxda Labada dal waa Ethiopia iyo Eritrea.
Shaki badan ayaa ka dhashay is afgaradka madaxda Geeska Africa waa tan keentay in xildhibaanada mooshinka ay ka gudbiyeen madaxweynaha ku cadeeyaan in heshiisyo halis gelin kara dalka uu galay.